Shirka Maamul-u-sameynta Jubbooyinka
Sabti, Bisha Shanaad 07, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 03:25
Muuqaalka Magaalada Kismaayo
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socota qaban-qaabada dhismaha maamulka Jubbaland, waxaana la filayaa in shirweynaha lagu dhisayo maamulkaasi la qabto 23-ka Febraayo ee bishan.
Maxamed Maxamuud Yuusuf, “Aw-Libaax” oo ka mid ah guddiga qaban-qaabada, ayaa VOA-da u sheegay in dadka deegaanku ay yihiin kuwa howsha wada isla markaana aysan IGAD wax lug ah ku lahayn howshooda.
Waxaa in dhaweydba jiray muran xooggan oo ka taagnaa sidii maamul loogu sameyn lahaa jubbooyinka iyo cidda ay tahay inay maamulkaasi soo dhisaan, hase ahaatee Maxamed Aw-Libaax ayaa sheegay in maamulkan la dhisayo uu yahay mid hoostagaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Wareysiga Maxamed Maxamuud Yuusuf "Aw-Libaax" halka hoose ka dhageyso.
Wareysiga Maamul-u-sameynta Jubbooyinka